Zonke iziphuzo ezibandayo zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili: amaminerali kanye izithelo. lamanzi esiphethu kungaba yemvelo noma emishinini.
lamanzi esiphethu Yemvelo
lamanzi esiphethu Yemvelo - a amanzi zemvelo nge nosawoti wamaminerali kanye amagesi. Abaningi babo othathwe emithonjeni Tatarstan, North-Caucasus, Trans-iBaikal nezinye izifunda eziningi zaseRussia. lamanzi esiphethu Yemvelo kungabuye ihlukaniswe ukuphuza, wezokwelapha-ithebula nokwelashwa. Ukwelapha amanzi asetshenziselwe noma yini enye injongo udokotela ukuba khona, futhi emakamelweni okudlela futhi yezokwelapha-ithebula ngokuvamile asetshenziselwa zicime ukoma kwazo.
lamanzi esiphethu iqale elicwengekileyo futhi ayegcwele carbon dioxide bese bevalela ukudayiswa.
amanzi amaminerali Artificial
lamanzi esiphethu Artificial - kubuye isiphuzo carbonated. Isenzakalo esidume kunazo zonke kukhona soda, seltzer, igumbi lokudlela churinskaya. Inhlanganisela ukuphuza amanzi kanye magnesium nosawoti, i-calcium kanye sodium, ayegcwele carbonic acid, kuyasiza ukwakha lamanzi esiphethu yokufakelwa. On amalebula amabhodlela isiphuzo bottling ngempela ebekiwe usuku, kanye nenombolo, ukwakheka kanye nezincomo ukusetshenziswa futhi isitoreji. Amanzi kumele kucaciswe futhi ngaphandle kokwengeza nezivimbelakuvunda, futhi ube nephunga ethile futhi ukunambitheka.
lamanzi esiphethu kumele agcinwe ezingeni lokushisa kusuka degree angu +5 ukuba +12 endaweni emnyama futhi yomile. Impilo kufanele singeqi ezinyangeni ezingama-4.
ukukhiqizwa isiphuzo carbonated
Izithelo iziphuzo zidalwe kusukela amanzi okuphuza, carbon dioxide nesiphuzo noma infusions. Ukubekezelelana kwalezi ziphuzo uyakulondoloza izixazululo, acid ukudla kanye organic udayi kwengoma. Ngokuvamile, ukulungiswa izithelo iziphuzo ezinesoda esetshenziswa izingxenye ezimbili eceleni egcinwe: enamakha extractive ingxenye. Ingxenye yokuqala kuyinto isixazululo utshwala amafutha abalulekile, kwesibili - ketshezi viscous nge ukunambitheka ababayo astringent. Bobabili izingxenye axutshwa e ubuhlobo nabathile ngamanzi kanye noshukela isiraphu. Ngokubukeka, izithelo iziphuzo ezinesoda kungaba esobala noma turbidity, ukwakheka - silnogazirovannye, srednegazirovannye futhi kancane carbonated. Futhi, bona zingahlukaniswa zibe 5 sub-zilwane.
uphuzo carbonated enziwe ngezinto zemvelo eluhlaza, ukuthi yenziwe ngesisekelo ayo, Syrups, infusions noma izithelo iziphuzo, ezonambitha izithelo zemvelo: raspberry, zamapetshisi, ikiwi kanye nabanye. Iziphuzo eyenziwe zokwenziwa Uketshezi amele isilinganiso ushukela isiraphu, citric acid, flavorings kanye colorings. Tonic iziphuzo carbonated aqukethe infusions kanye ezikhishwe of umfire, zikagamthilini, lemongrass nezitshalo efanayo aqukethe alkaloids nezinye izinto eziphila abakhuthele. I iziphuzo ezivamile lokhu zenyathi kukhona "Pepsi", "Tonic", "Coca-Cola" futhi "iBaikal". Ukuze ebiyelweyo iziphuzo carbonated kukhona "Bell" futhi "Ihlathi isixha". soda okunjalo iqukethe lokuhlushwa lelitfutfukile amavithamini, oncibilikayo emanzini.
Futhi uhlobo lokugcina izithelo iziphuzo ezinesoda ingabe iziphuzo carbonated, injongo ekhethekile. Lokhu zenyathi abantu ngobubanzi ezithile izinkinga isimiso sezinzwa, isifo sikashukela noma ukuhlanza umzimba kusuka izinsimbi ezisindayo.
Indlela ukunquma izinga
Ukuze sithole izinga uphuzo carbonated usebenzisa izindlela eziningana. Lapho uyithela emfuleni ekhanyayo phezu Bubbles igesi musa ukukhiqiza Foam, isiphuzo muhle. Ukuze sithole izici ezibukwayo soda kuyadingeka ukubeka ingilazi esobala egcwele ephepheni elimhlophe futhi ukulibuka ngesi khona inzika. uphuzo carbonated uma kusetshenziselwa kungenzeka ukuhlola lokuhlushwa ukunambitheka, iphunga elimnandi kanye asidi.